Firefox 75: antso ho amin'ny dingana fampandrosoana miaraka amin'ny vaovao | Avy amin'ny Linux
Iray andro monja taorian'ny nanombohana ny tranokala Firefox 74, araka ny efa noresahinay tao amin'ity bilaogy ity, fa nahatratra ny kinova farany navoakany farany, dia miasa miaraka amin'ireo kinova lehibe manaraka ireo mpamorona, izay Mozilla Firefox 75.
Azonao atao ny manomboka mahita hoe inona ity tetik'asa ity ary andramo ny vaovao mivoaka izy ireo mampiasa ny Beta azo jerena ao amin'ny tranonkala Mozilla ofisialy. Hatramin'ny 10 martsa 2020, Mozilla dia manome ity fonosana binary ity amin'ny dingana fampandrosoana mba hahafahan'izy ireo mizaha toetra sy manadio izay ho vokatra farany.
Anisan'ireo zava-baovao malaza indrindra hitanao fa hiaraka ity kinova amin'ny tranokala Firefox ity bara adiresy nohavaozina Tsara kokoa amin'ny efijery kely izy io ary manamora kokoa ny fidiran'ny mpampiasa amin'ny tranokalan'izy ireo ankafizin'ny hetsika mihetsika. Izany hoe nanatsara ny fampiasana azy io mba hahamora kokoa anao.
Ankehitriny, amin'ny Firefox 75 dia azonao atao ny misafidy bara adiresy vaovao ary ao amin'ny boaty tolo-kevitra fikarohana dia hivelatra avy hatrany izy io mba hampisehoana aminao ny rohy ao amin'ny tranonkala ankafizina na be mpitsidika indrindra. Noho izany dia ho azonao eo an-tànana amin'ny tsindry iray izy ireo. Fepetra izay anisan'ny fonosana fanovana hafa izay mitady hanova ny endrika ivelany.
Firefox 75 dia manana interface tsara nohavaozina hanatsarana ny traikefa ary hadio kokoa, manatsara ny fampiasana azy eo amin'ny efijerin'ny fitaovana finday kely na hamaha ny olana iraisana mitranga ankehitriny amin'ny kinova taloha. Mazava ho azy, mitondra vaovao misimisy ihany koa izy, toy ny fanatsarana ny fanohanana ny HTTPS misy mpizara tranonkala tsy voalamina tsara, sns.
Ary vaovao bebe kokoa no azo ampiana mandra-pahatonganao 7 aprily amin'ity taona ity ihany, izany hoe afaka andro vitsivitsy raha mandeha tsara ny zava-drehetra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » Firefox 75: antso ho an'ny dingana fampandrosoana miaraka amin'ny vaovao